कांग्रेसले उपसभामुखमा रयाल चुहाउने कि कडा लाेकतन्त्रकाे पहरेदार बन्ने ? Globe Nepal News Portal
काठमाण्डाैं,माघ ८ गते । हत्या अभियाेग लागेका अग्नि सापकाेटा माघ १२ गते सभामुख हुने लगभग निश्चित छ।काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या अभियाेगमा उनी माथि अहिले पनि मुद्धा चलिरहेकाे छ।र,सर्वाेच्च अदालतले माघ २२ गते मुद्धाकाे सुनुवाइकाे लागि पेशी ताेकेकाे छ।तर मंगलवार तिनै सापकाेटाकाे एउटा मात्र उम्मेदवार परयाे जसले गर्दा सभामुखकाे रूपमा उनी माघ १२ गते निर्विराेध निर्वाचित हुने पक्का छ।कतिसम्म भने अघिल्लाे दिनसम्म कडा प्रतिपक्षकाे भुमिका निर्वाह गर्ने संकेत दिएकाे कांग्रेसले भाेलिपल्ट ठयाक्कै उल्टाे निर्णय गरयाे र सापकाेटाकाे नाममा सहमति जनाउन पुग्याे। विपक्षमा बसेकाे कांग्रेसले संसदमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर खुव टिप्पणी भइरहेकाे बेलामा कांग्रेस नेतृत्वले उल्टै सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएकाे,सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप अायाेगमा भागवण्डा पाएपछि माैन बसेकाे र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेल प्रचण्ड निवास पुगेर उपसभामुखकाे माग गरेकाे दृश्य लाेकतन्त्र प्रेमीलाइ रूचेकाे छैन।लाेकन्त्रकाे पहरेदार बन्नु पर्ने कांग्रेस सानाे तिनाे पद र भागवण्डामा किन अल्झिरहेकाे छ ? यतिवेला उठेकाे ठुलाे सवाल नै यहि हाे ।
यस्ताे बेलामा सापकाेटा भने सभामुख बन्न सक्षम भएका छन।तर उनकाे अबका दिन पनि उति सहज भने छैनन।बलात्कार अभियाेगमा जेल परेका कृष्णवहादुर महराकाे ठाउँमा सभामुख हुन लागेका ब्यक्ति स्वच्छ र सादा हाेस भन्ने जनताकाे चाहना हाे तर बलात्कार अभियाेगीकाे ठाउँमा हत्याकाे अाराेप लगाेका नेता सभामुख हुन लाग्दा समेत कांग्रेस भने उल्टै भागवण्डामा लिप्त छ।
त्यसाे त नेकपाले सभामुख पद यतिकै टुंगो लगाएको भने होइन । चार महिनासम्म चलेको बहश र विवाद पछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल विच माघ ६ गते बल्ल सहमति जुटेको हो । तर,यसपछि पनि ढुक्कको वातावरण भने बनेको छैन ।
यसपटक सभामुख चयनको लागि नेकपालाइ असाध्यै सकस परेको छ । यसको लागि उसले दुइ जना पात्र सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्वाहाङफेको मन दुखाएको छ । कतिसम्म भने जादा जादै उपसभामुख शिवमायाले त बरु राजतन्त्र हटाउन सकियो तर पितृसत्ता हराउन सकिन भनेर गम्भीर दुखेसो गरेकी छिन । उनले नेकपाले पार्टी निर्णय गरेर ठाडो निर्णय गरेको समेत खुलासा गरिन र यसलाइ कुनै हालतमा आफुले नटेरेको समेत बताइन ।
संसद सार्वभौम हो र यो जनप्रतिनिधिको थलो हो । विधि बनाउने थलो यति स्वच्छ र यति निर्भयपुर्ण हुनुपर्छ कि त्यहा जनताको पक्षमा योग्य र उपयुक्त विधि बन्नुपर्छ । भन्न त सभामुखको उम्मेदवार सापकोटाले संसदलाइ अझ उचो राख्नेछु भनेका छन तर,हिजो बलात्कार आरोपी सभामुख र आज हत्याको आरोपी सभामुख रहन पुगे भने यो संसदको गरिमा कति रहला ?